pamusoro 5 Things Kuitira On A Short Kushanyirwa To Luxembourg | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 5 Things Kuitira On A Short Kushanyirwa To Luxembourg
Luxembourg City chinhu mashiripiti mubatanidzwa yekare uye ano pamwe omunharaunda uye pasi pose, nyore uye umbozha. Zviri yakachengeteka kutaura kuti vane zvose izvi eclectic mikana, hapana mukana iwe aizowana kufinhikana. Ndicho chikonzero zvakanga zvakatiomera zita chete pamusoro 5 zvinhu kuita pfupi kushanya kuna Luxembourg. asi, tinenge woripa zvinofambidzana!
1. History, Art & tsika nemagariro
guta yakanaka iyi inopa inonakidza sanganisa nhoroondo, tsika nemagariro, unyanzvi uye zviwanikwa nharaunda. With vazhinji European Union mahofisi uye madhipatimendi maiva muna Luxembourg City, pane chaiyo yetsika maonero kuti guta rino.
With yaro yakawanda kuratidzira uye mamiziyamu, nematende uye masvingo, Luxembourg rinobatanidza ane incredible siyana kunonakidza nemagariro nzvimbo. Netsika nounyanzvi Luxembourg uri zvinoratidza vagari vemo vechokwadi, siyana uye yetsika. Luxembourg angava kuzvikudza kwayo pose nedzimwe tsika mabasa yakaipa inobva unyanzvi uye netsika kune anoratidza uye mitambo. Kuitira kuti nyore kuti kuziva unyanzvi uye tsika Luxembourg, Luxembourg nokuti Tourism akasika Luxembourg Card: vakasununguka kuwana kupfuura 60 nemagariro nzvimbo Luxembourg uye Mukuru Region.
Sezvo chikamu Top 5 zvinhu kuita pfupi kushanya kuna Luxembourg, unofanira zvachose vanoshanyira Letzebuerg City Museum. The miziyamu iri muNzvimbo muzvivako mana nenhoroondo. The zvachose kuratidza "The Luxembourg Story" inoratidza nhoroondo guru Grand Duchy-gore zviuru zvinopfuura. Next akawanda zvinhu yepakutanga, ari kuratidza rinotaura kukura muguta ichishandisa nhevedzano dzomumaguta yokutevedzera. Temporary kuratidzira dzinoitwa nezvemhiko mamwe maviri kwevari miziyamu. Iva nechokwadi kuti tarisa zvavari kana iwe kushanyira!
2. Bock Casemates - Casemates weZimbabwe Bock
Casemates Du Bock vano- nyore pasi aimbova Castle, Montee of Clausen. The Bock Casemates ndiro 17 kiromita refu tanera, Pakutanga akavezwa padombo pedyo ChiSpanish pakati 1737 uye 1746. The casemates vanozivikanwa kwayo nhoroondo kukosha muna Luxembourg, kuva utiziro kupfuura 35,000 veko uye zviuru varwi panguva WWI uye WWII. Zvinosanganisira ratinoona ndima uye anoyevedza dombo masitepisi, enhoroondo mugero pamusoro Casemates ari UNESCO World Heritage Site. Akamurairawo cellphones avo uye kurongedza kuti bhegi. Uyu unofanira-kuona musi Top wako 5 zvinhu kuita pfupi kushanya kuna Luxembourg!
MuFrankfurt kuna Luxembourg Zvitima
Amsterdam kuna Luxembourg Zvitima
ReRotterdam kuna Luxembourg Zvitima
3. Heritage Religious muna Luxembourg
Vaya vanofarira nhaka dzechitendero vanofanira kushanyira Quirinus chapero. A gothic outorwa chapero yakavakwa 1355 uye pamwe achera muruware. Panzvimbo yayo, kwakange aimbova vahedheni rutumba iyo Romans akazotevera ainamata ive tsvene yechiKristu. A dombo mabviro RINOFAMBIRA pano. Vanhu zvoga rinobatsira achirapa simba mvura yaro kana zvirwere ziso.
Kubvira muzana remakore rechi11, nzvimbo kwave vatsvene Saint Quirin uye kubvira pakutanga rechi13, mabasa yaiitwa mumapako maviri chapero.
The gothic outorwa chapero yakanga yakavakwa 1355, apo denga uye duku bhero-shongwe yakawedzerwa pashure, pakupera kwezana remakore rechi19.
Church St Michael ndiro kereke mukuru Luxembourg guta uye rakaparadzwa uye reconstructed kanoverengeka mumakore emakore. Church Saint Michel ndiye mumwe mukuru zvivako zvechitendero Luxembourg. Chivako wacho nhoroondo Mikoko shure 1987 kana Count pamusoro Luxembourg akavaka diki chapero mukati ake Castle nhandare. Kereke aripo anosanganisa munhu Romanesque France pamwe Gothic STRUCTURAL okunze uye Baroque mukati zvemaoresa. Ona zvakajeka Maberere ari petemberi. Large Stained girazi mahwindo. A uwandu zvivezwa dzechitendero. Uye Kukwiridzira kukuru kweMhandara kupenda kwakakwira pamusoro pearitari yeBaroque.
4. Palais Grand-ducal on pfupi kushanya kuna Luxembourg
kana akitekicha chinhu kwenyu, ipapo Palais Grand-ducal anofanira kuva chikamu Top 5 zvinhu kuita pfupi kushanya kuna Luxembourg. Sezvo yepakutanga yakagara Grand Duke uye mhuri youmambo, Grand ducal Palace muna Luxembourg City ari zvinoshamisa chimedu mapurani, yakavakwa muzana remakore rechi16 panguva Flemish Renaissance. Mumuzinda wacho mukati design sokuti kuva nemasango wemishonga zvakasiyana siyana siyana. A yaigona interplay pakati da uye Ages-gothic Style, uye mumaindasitiri chiedza mazano nokuda ChiJerimani maindasitiri mugadziri – Ingo Maurer.
5. The Chocolate House mu Luxembourg City
The Chocolate House mu Luxembourg inozivikanwa chokoreti Ichokwadi. Asi kunze zvinozipa ikaruma uye zvakasiyana-siyana makeke, unogona kunakidzwa nyama pizza dzavo uye salads. Kana tenuka pazere, unogona kugara pasi mukati mevhu repasi kana kumusoro.
The Chocolate House riri pamberi Grand ducal Palace. Saka tora chigaro chako uye kunakidzwa Hotchocspoon. Tine chokwadi iwe ndichakuita Chocolate House chaunofarira vakatozodzokera. chisingakanganwiki, hwakanakisisa ruzivo, pane zvinhu zvose.
Nokuti dzimwe mari mafaro, regai kurasikirwa chirimo muna Festival City. Zvinotora nzvimbo kubva pamugumo June kusvikira pakutanga September. Munguva iyi zvaunogona nakidzwa vakasununguka Concerts, misika, kuratidzira uye nemitambo zviitiko munyika guta.
Tora chitima kuenda kuLuxembourg uchishandisa SaveATrain! The inoita uye nyore nzvimbo bhuku adventures ako kumativi Europe.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ngaabve kuti / kana / of uye mimwe mitauro.
#mapfupi #top5stststodo #toptostodo #toptips Rukuzemubhogu